Incruse Ellipta vs. Spiriva: मतभेद, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम हो - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य चेकआउट कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा प्रेस औषधि जानकारी औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी समुदाय, कम्पनी कम्पनी, चेकआउट समुदाय कम्पनी, औषधि जानकारी समाचार, कल्याण खेलहरु घरपालुवा जनावर
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Incruse Ellipta vs. Spiriva: मतभेद, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम हो
यस अनुसार अमेरिकी फेफड़े संघ , दीर्घकालीन अवरोधक फुफ्फुसीय रोग, वा सीओपीडी, संयुक्त राज्य अमेरिकामा रोगले मृत्युको तेस्रो प्रमुख कारण हो। करिब १ million मिलियन भन्दा बढी मानिसहरूलाई सीओपीडी पत्ता लागेको छ, करोडौं बढी प्रभावित हुन सक्छ तर अहिलेसम्म सचेत छैन। COPD एक पुरानो भडकाउने फोक्सो रोग हो। सीओपीडी भएका बिरामीहरूले सास फेर्न, खोकी, घरघर निकाल्ने, र बलगम उत्पादन गर्न कठिन महसुस गर्दछन्। सीओपीडीमा एम्फाइजेमा र क्रोनिक ब्रोन्काइटिस समावेश छ। सीओपीडी प्रबन्ध गर्नका लागि प्रयोग गरिने दुई सामान्य औषधीहरू मौखिक रूपमा श्वासद्वारा लिइएका औषधिहरू हुन् जसलाई Incruse Ellipta र Spiriva भनिन्छ।
Incruse Ellipta र Spiriva दुबै ब्रान्ड नाम औषधि हुन् जुन लामो अवधिमा मर्मत सम्भार उपचारको लागि संकेत गरीन्छ सीओपीडी । दुबै औषधिहरू संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित छ। तिनीहरूलाई औषधीहरूको समूहमा वर्गीकृत गरिएको छ जसलाई एन्टिकोलिनर्जिक्स भनिन्छ। उनीहरूले फोक्सोमा मांसपेशीहरूलाई आराम दिएर सास फेर्न सजिलो बनाउँदछन्
जे होस् Incruse Ellipta र Spiriva दुबै एन्टिकोलिनर्जिक्स COPD का लागि प्रयोग गरिन्छ, ती वास्तवमा उस्तै छैनन्। प्रत्येक औषधिको बारेमा बढि जान्नको लागि तल पढ्न जारी राख्नुहोस्।
Incruse Ellipta र Spiriva बीचको मुख्य भिन्नता के हुन्?
Incruse Ellipta र Spiriva दुबै एन्टिकोलिनर्जिक औषधि हो, ब्रान्ड नाममा मात्र उपलब्ध छन्। तिनीहरूलाई लामो-अभिनय मस्करीनिक विरोधी (लामा) को रूपमा पनि चिनिन्छ।
Incruse Ellipta को रासायनिक नाम umeclidinium हो। यो केवल इनहेलर फारममा उपलब्ध छ। GlaxoSmithKline (GSK) Incruse Ellipta बनाउँछ।
एक सामान्य व्यक्तिको रगतमा चिनीको स्तर के हो?
Spiriva को रासायनिक नाम tiotropium ब्रोमाइड हो। यो दुबै मौखिक क्याप्सूलको रूपमा उपलब्ध छ (मौखिक इनहेलेसनको लागि, निलिनु हुँदैन, जसलाई सुख्खा पाउडर इनहेलर पनि भनिन्छ) र मौखिक इनहेलेसन धुंध। Boehringer Ingelheim फार्मास्यूटिकल्स Spiriva बनाउँछ।
Incruse Ellipta र Spiriva बीच मुख्य भिन्नता
इल्रुपा इलिपटा Spiriva
औषधि वर्ग एन्टिकोलिनर्जिक एन्टिकोलिनर्जिक
जेनेरिक नाम के हो? यूमेक्लिडिनियम टियोट्रोपियम ब्रोमाइड
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? इल्रूपे इलिप्टा इनहेलर (इनहेलेसन पाउडर) Spiriva Handihaler (इनहेलेसनको लागि क्याप्सूल), Spiriva रेसिमेट (इनहेलेसन धुंध)
मानक खुराक के हो? एक मौखिक इनहेलेसन (.5२. m एमसीजी) हरेक दिन एकै पटकमा Spiriva Handihaler: एक Spiriva क्याप्सुल (१ m mcg) को पाउडर सामग्रीको दुई मौखिक इनहेलेसन दैनिक एक पटक, Handihaler उपकरणको साथ (क्याप्सूल मौखिक इनहेलेसनको लागि मात्र हो; निगलनु हुँदैन)
Spiriva Respimat: २ मौखिक इनहेलेसनहरू (१.२25 mcg वा २. m mcg को) एक पटक
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्कहरू Handihaler: वयस्कहरू
रेस्पिमेट: वयस्क र छ वर्ष र माथिका बच्चाहरू
शर्तहरू Incruse इलिप्टा र Spiriva द्वारा उपचार
Incruse Ellipta र Spiriva दीर्घकालीन अवरोधक फुफ्फुसीय रोग (COPD) को मर्मत उपचारको लागि संकेत गरीएको छ। अधिक विशेष रूपमा, Spiriva Handihaler निर्माता जानकारी नोट गर्दछ कि यो COPD बिरामीहरूमा exacerbations कम गर्न प्रयोग गरिएको छ।
स्पिरिवा रेस्पिमेटमा एक थप संकेत छ - patients बर्ष र अधिक उमेरका बिरामीहरूमा दमको मर्मतसम्भार उपचार।
न त औषधि तीव्र आक्रमणको लागि प्रयोग गरिनु पर्छ।
सर्त इल्रुपा इलिपटा Spiriva
COPD को मर्मत उपचार हो हो (Handihaler र Respimat)
छ वर्ष र माथिका बिरामीहरूमा दमको मर्मतसम्भार उपचार हैन हो (Respimat)
के Incruse Ellipta वा Spiriva अधिक प्रभावी छ?
त्यहाँ दुई औषधीहरू सिधा तुलनात्मक न्यूनतम डाटा छ। A १२ हप्ताको अध्ययन सीओपीडी भएका १,००० भन्दा बढी बिरामीहरूमा इंक्रस एलिप्टा र स्पिरिभाको प्रभावकारिता र सुरक्षाको तुलना गर्नुहोस्। प्राथमिक अन्तिमबिन्दु एक दिनमा second 85 मा एक सेकेन्डमा (फेब्रुलाई पनि भनिन्छ) गन्ध मजबुत एक्सप्रीरी मात्रा थियो। बिरामीहरू सेन्ट जर्जको श्वसन प्रश्नावली र अन्य मूल्या using्कनहरू प्रयोग गरेर मूल्या using्कन गरियो। दुबै औषधिहरूले जीवनको गुणस्तरमा अर्थपूर्ण सुधारहरू देखायो र सुरक्षाको हिसाबले राम्ररी सहि सके। अध्ययनले इन्क्रुस इलिप्टालाई स्पिरिवा भन्दा बढी प्रभावकारी भएको निष्कर्षमा पुगेको छ।
केवल तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईंको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी औषधि निर्धारित गर्न सक्दछ। उसले वा उसले तपाईको लक्षणहरू र तपाईको मेडिकल ईतिहासको गम्भीरतालाई विचार गर्न सक्छ, साथ साथै तपाईंले लिनुहुने अन्य औषधिहरू जुन सम्भवतः इन्क्रुस इलिप्टा वा स्पिरिवासँग अन्तर्क्रिया गर्दछ।
कभरेज र Incruse इलिप्टा बनाम Spiriva को लागत तुलना
बीमा योजनाहरू र मेडिकेयर पार्ट डीले दुवै समावेशी इलिप्टा र स्पिरिवा कभर गर्दछ, तर कभरेज रकम योजना अनुसार फरक हुन्छ।
Incruse Ellipta इनहेलरको आउट-अफ-पकेट मूल्य $ 477 को बारेमा हो, तर तपाईं एक सि Sing्केयर कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यसको मूल्यलाई about 306 मा कम गर्न।
एक Spiriva Handihaler को आउट-को-पकेट मूल्य $ 444 को बारेमा हो, र एक Spiriva Respimat $ 600 को बारे मा छ। एकलकेयर कूपनको प्रयोगले हन्डिहलर वा रेस्पिमेट या तको लागि लगभग $ 404 लाई कम गर्दछ।
मानक खुराक १ इनहेलर १ Handihaler वा १ Respimat
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ 8- $ 395 $ - $ 4२4
एकलकेयर लागत6306 + $ 404 +
Incruse Ellipta vs Spiriva का सामान्य साइड इफेक्टहरू
Incruse Ellipta को सबै भन्दा सामान्य पक्षहरू nasopharingitis (सामान्य चिसो), माथिल्लो श्वास नलिका संक्रमण, र खोकी हो।
स्पिरिवाको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू माथिल्लो श्वासप्रणाली संक्रमण, साइनसिटिस, छाती दुख्ने, सुख्खा मुख, कब्ज, र मूत्र पथ संक्रमण हो।
यो साइड इफेक्ट को पूर्ण सूची छैन। अन्य प्रतिकूल प्रभावहरू हुन सक्छन्। Incruse Ellipta र Spiriva को साइड इफेक्टहरूको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
नासोफ्यारेन्जाइटिस / ग्रसनीशोथ हो %% हो %%
माथिल्लो श्वसन पथ संक्रमण हो %% हो %१%
खोकी हो %% हो >%%
छातीको दुखाइ हैन - हो %%
सुख्खा मुख हैन - हो १%%
कब्ज हैन - हो %%
बान्ता हैन - हो %%
साइनसाइटिस हो रिपोर्ट गरिएको छैन हो एघार%
पुराना हो रिपोर्ट गरिएको छैन हो %%
आर्थ्रलगिया (जोड्ने पीडा) हो दुई% हो 2.२%
मूत्र पथ संक्रमण हो रिपोर्ट गरिएको छैन हो %%
स्रोत: डेलीमेड ( इल्रुपा इलिपटा ), डेलीमेड ( Spiriva )
Incruse Ellipta vs Spiriva का ड्रग अन्तरक्रिया
किनकि इंक्रस एलिप्टा र स्पाइरिवा एन्टिकोलिनर्जिक औषधि हो, तिनीहरूलाई अन्य एन्टिकोलिनर्जिक औषधिहरूको साथ प्रयोग गर्नु हुँदैन। संयोजनले साइड इफेक्टमा बृद्धि गर्न सक्छ, जस्तै मूत्र प्रतिधारण वा स narrow्केत-कोण ग्लूकोमा।
अन्य औषधि अन्तर्क्रिया हुन सक्छ। औषधि अन्तर्क्रियाको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
औषधि औषधि वर्ग इल्रुपा इलिपटा Spiriva
Trihexyphenidyl Anticholinergics हो हो
Incruse Ellipta र Spiriva को चेतावनी
Incruse Ellipta वा Spiriva प्रयोग नगर्नुहोस् यदि तपाईंसँग दूध प्रोटीन वा कुनै पनि सामग्रीहरूमा गम्भीर अतिसंवेदनशीलता छ।
Incruse Ellipta वा Spiriva द्रुत बिग्रने वा सम्भावित जीवन-जोखिम भरी COPD तीव्र भागहरूमा प्रयोगको उद्देश्यले होइन। यी औषधिहरू तीव्र एपिसोडहरूमा अध्ययन गरिएको छैन र गम्भीर लक्षणहरूलाई कम गर्न प्रयोग गरिनु हुँदैन। तीव्र लक्षणहरूको राहतको लागि अतिरिक्त डोज नलगाउनुहोस्। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईंलाई एक तीव्र एपिसोड प्रबन्ध गर्न निर्देशनहरू दिनुपर्दछ - तपाईं सम्भवतः एक भिन्न, छोटो-अभिनय इनहेलर उद्धार इनहेलरको रूपमा प्रयोग गर्नुहुनेछ।
इक्रुस एलीप्टा वा स्पिरिवाले सम्भावित जीवनलाई जोखिममा पार्ने विरोधाभासी ब्रोन्कोस्पाज्म (सास फेर्न वा घरघर बनाउने बिगार्न) निम्त्याउन सक्छ, जसलाई तुरुन्त छोटो अभिनय गर्ने ब्रोन्कोडाइलेटर इनहेलरसँग उपचार गर्नुपर्दछ। यदि यो हुन्छ भने, Incruse Ellipta वा Spiriva तुरुन्तै रोक्नुहोस्। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले एक वैकल्पिक उपचार लिख्न सक्नुहुन्छ।
इक्रुस एलीप्टा वा स्पाइरिवाले एनाफिलेक्सिस, एंजियोएडेमा, खुजली, वा पुराना सहित अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रिया निम्त्याउन सक्छ। Incruse Ellipta or Spiriva लाई रोक्नुहोस् र यदि यी प्रतिक्रियाहरू देखा पर्दछ भने तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई सास फेर्न समस्या भयो वा तपाईंको ओठ, जिब्रो र मुख वरिपरि सूजन भयो भने आपतकालीन उपचार खोज्नुहोस्।
साँघुरो कोणको जलबिन्दु भएको बिरामीहरूमा सावधानीका साथ Incruse Ellipta वा Spiriva प्रयोग गर्नुहोस्। बिरामीहरू र तिनका सल्लाहकारहरूले तीव्र साँघुरो कोणको जलबिन्दु (आँखा दुखाइ, धमिलो दर्शन, दृश्य हेलोज) को लक्षण खोज्नु पर्छ। यदि यी लक्षणहरू देखा पर्दछ भने तत्काल तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस्।
मूत्र प्रतिधारणको साथ बिरामीहरूमा सावधानीका साथ इक्रुस इलिप्टा वा स्पिरिवा प्रयोग गर्नुहोस्। बिरामी र सल्लाहकारहरूले पेशाब सम्बन्धी लक्षणहरूको बारेमा सचेत हुनुपर्दछ, जस्तै पीडादायी पेशाब र पेशाबमा कठिनाई। यदि तपाईंले यी लक्षणहरू अनुभव गर्नुभयो भने तुरून्त तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस्।
एन्टिकोलिनर्जिक प्रभावहरूको लागि मध्यम देखि गम्भीर गुर्दे कमजोरी बिरामीहरूको निरीक्षण गर्नुहोस्।
क्याप्सूलहरू मौखिक ईन्सेलेसनको लागि मात्र हो र निल्नु हुँदैन। केवल Handihaler उपकरणको साथ क्याप्सुलहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
Incruse Ellipta vs Spiriva को बारे बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
Incruse Ellipta के हो?
Incruse Ellipta एक एन्टिकोलिनर्जिक औषधि है जो COPD का लागि प्रयोग गरिन्छ। यसले फोक्सोलाई आराम गर्न मद्दत गर्दछ, सास फेर्न सजिलो बनाउँदै।
Spiriva के हो?
स्पिरिवा सीओपीडीका लागि प्रयोग हुने एन्टिकोलिनेर्जिक औषधि पनि हो। यो इनहेल्ड क्याप्सुलको रूपमा र इनहेलेसन धुंधको रूपमा पनि उपलब्ध छ।
के Incruse इलिप्टा र Spiriva समान छन्?
दुबै औषधिहरू समान र समान श्रेणीका ड्रगहरू हुन्। यद्यपि उनीहरूसँग केहि भिन्नताहरू छन्, जस्तै साइड इफेक्ट र डोज, माथि उल्लेखित।
cephalexin कान संक्रमण को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ
Incruse Ellipta वा Spiriva राम्रो छ?
सीमित डाटा Incruse Ellipta Spiriva सँग तुलना गर्न उपलब्ध छ। एउटा अध्ययनले Incruse Ellipta लाई अझ प्रभावकारी देखाउँथ्यो, तर दुबै औषधिहरू समान रूपमा सुरक्षित छन्। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले निर्धारित गर्न सक्दछ कि कुन औषधि तपाईंको लागि उत्तम हो।
के म गर्भवती हुँदा Incruse Ellipta वा Spiriva प्रयोग गर्न सक्छु?
गर्भावस्थामा Incruse Ellipta वा Spiriva को प्रभावहरु बारे पर्याप्त जानकारी छैन। चिकित्सा सल्लाहका लागि तपाईको OB-GYN बाट परामर्श लिनुहोस्। यदि तपाईं पहिले नै Incruse Ellipta वा Spiriva लिइरहनु भएको छ र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भन्ने फेला पार्नुभयो भने, तपाईंको OB-GYN बाट परामर्श लिनुहोस्।
के म Incruse Ellipta वा Spiriva रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
यद्यपि Incruse Ellipta वा Spiriva मदिरासँग अन्तर्क्रिया गर्दैन, धेरै समय सम्म रक्सी पिए पनि COPD लक्षणहरू बढाउन र तपाइँको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कमजोर गर्न सक्छ, तपाइँको COPD लक्षण बिगार्न। रक्सी र COPD को बारेमा अधिक जानकारीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
Incruse Ellipta एक स्टेरोइड हो?
न। Incruse Ellipta एक स्टेरोइड हैन। यसलाई एन्टिकोलिनर्जिक औषधिको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। यसले सास फेर्न सजिलो बनाउन वायुमार्गमा मांसपेशीहरूलाई आराम दिन्छ।
केहि इनहेलरहरूमा इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड हुन्छन् र COPD को उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। एडवायरमा फ्लुटिकासोन (एक स्टेरोइड) र सालमेटरोल (एक लामो-अभिनय बीटा-एगोनिस्ट) हुन्छ। अर्को उदाहरण ब्रियो इलिप्टा हो, जसमा फ्लुटिकासोन फ्युरोएट (एक स्टेरोइड) र विलान्टरोल (एक लामो-अभिनय बीटा-एगोनिस्ट) हुन्छ।
कुन इनहेलर Spiriva बराबर छ?
Spiriva र Incruse Ellipta को समान कोटिमा अन्य इनहेलरहरूमा Tudorza Pressair (aclidinium) र Sebri Neohaler (glycopyrrolate) सामिल छन्।
COPD का लागि उत्तम इनहेलर के हो?
त्यो गाह्रो प्रश्न हो। यो केहि कारकहरूमा निर्भर गर्दछ, जस्तै गम्भिरता र लक्षणहरूको प्रकार, तपाईंको चिकित्सा ईतिहास, र तपाईंले लिनुहुने अन्य औषधिहरू। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले निर्धारण गर्न सक्दछ कि कुन इनहेलर तपाईको लागि उत्तम हो।
कहिले सम्म valtrex तपाइँको प्रणाली मा रहन्छ
बजारमा दर्जनौं इनहेल्ड औषधिहरू छन्। यहाँ COPD का लागि केहि सामान्यतया निर्धारित इनहेल्ड उपचारहरू छन्।
साबा (छोटो-अभिनय ब्रोन्कोडाइलेटरहरू, वा छोटो अभिनय बीटा-एगोनिस्टहरू): अल्बुटेरोल एचएफए, प्रोयर एचएफए, प्रोभेन्टिल एचएफए, भेन्टोलिन एचएफए, एक्सपेनेक्स
लाबा (लामो-अभिनय beta2 एगोनिस्टहरू): ब्रोभाना (अर्फोमेटेरोल), सेरेभेन्ट (सालमेटरोल)
लामा (लामो-अभिनय मस्करीनिक विरोधी): Incruse Ellipta (umeclidinium), Seebri (glycopyrrolate), Spiriva (tiotropium) Respimat or Handihaler, Tudorza Pressair (aclidinium)
लामा + LABA संयोजन इनहेलर: अनोरो इलिप्टा (umeclidinium / vilanterol), बेभेस्पी एयरोस्फीयर (glycopyrrolate / formoterol), स्टिओल्टो रेस्पिमेट (ओलोडाटेरॉल / tiotropium),
इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड्स: Qvar RediHaler (Beclomethasone), पुल्मिकोर्ट फ्लेक्सैलर (बुडेसोनाइड)
संयोजन कोर्टिकोस्टेरोइड + LABA: सिम्बिकोर्ट (बुडेसोनाइड / फार्मोटेरॉल), एडवायर (फ्लूटिकासोन / साल्मेटरोल), ब्रेओ (फ्लूटिकासोन / विलान्टरॉल), डुलेरा (मोमेटासोन / फार्मोटेरोल)
के तपाईंको बच्चालाई मानसिक स्वास्थ्य दिन चाहिन्छ?
निक फोल्सकी श्रीमती, टोरी फोल्स, POTS रोग मा चेतना जगाउन प्लेटफर्म को उपयोग गर्दछ
तपाइँ डाक्टर के हो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लागी देख्नुहुन्छ?
के म एडविल को 800 मिलीग्राम लिन सक्छु?
राती खोकी को लागी के लिने
बच्चाहरु मा कान को संक्रमण को लागी प्राकृतिक उपचार
कसरी छिटो एक मूत्राशय संक्रमण बाट छुटकारा पाउन